lundi, 05 février 2018 22:23
Mahajanga: Mpanao kiraro mandray entana halatra
Asa fanjairana kiraro no hanarontsaronan'ity lehilahy ity ny asa ratsiny. Izy no mpandray ireo entana rehetra avy angalarin'ilay namany. Tra-tehaky ny Zandary izy roalahy ireto.
Namaky bungalow ity farany teny amin'ny fokontany Amborovy. Avy any an-tafontrano no nidirany. Eny amin'ny brocanteur eny Marolaka no manjaitra kiraro ilay mpandray entana halatra.
Tsy kely lalana tokoa ny ratsy ary tsy azo jerena amin'ny endriny ivelany ny olona. Omaly alahady 05 janoary moa no nahasaronana azy ireo.
lundi, 05 février 2018 22:14
Enlèvement de Akil Cassam Chenai: Huit interpellations, le nom « Stéphanie » évoqué
Akil Cassam Chenai est toujours entre les mains des ravisseurs. Aucune demande de rançon n’est connue trois jours après l’enlèvement.
L’unité spéciale d’intervention (USI) de la police ou « Saka Mainty » prend en main la recherche. Huit personnes sont interpellées dans cette affaire, le nom « Stéphanie » est évoqué, alors qu’elle a été déjà condamnée à la prison à perpétuité suite au rapt des deux enfants mineurs, Annie et Arnaud, à Toamasina en 2015.
lundi, 05 février 2018 15:37
Tonga an-tanindrazana, Vonona handray andraikitra
Efa nandray andraikitra tamin'ny sehatra ambony teto amin'ny firenena ny taona 2013 ary mbola vonona hamita ny adidy sy handray ny andraikitra tandrify ho an'ity taona 2018 ity.
Rehefa mitambatra isika, dia
Bien arrivé au Pays.
J'ai déjà pris ma responsabilité pour le bien de Madagascar en 2013 et encore d'attaque pour ma mission en 2018.
lundi, 05 février 2018 14:01
Sambava: Voasambotry ny Polisy ilay nikapa antsy ka nahafaty ny rahalahiny
Ny 28 janoary 2018, hoy ny Commissaire de Police Sambava Totozara Théogène no nitranga ny fifamonoana mahatsiravina tamin’ireto mpiraitam-po ireto, izay niseho tao Soavinandriana. Resaka tahon-davanila izay an'ny Rain’izy roa, izay efa maty tamin’ny volana desambra 2017, no nampifanolana azy roalahy ka niafara tamin'izao fifamonoana izao.
Ilay zokiny no nahavita nandatsak'aina. Nilaza izy fa niaro tena rehefa nanambana zava-maranitra nikasa hanindrona azy ny zandriny.
Nandositra anefa izy raha vao fantany fa maty voakapa antsy ny zandriny atao hoe Eric dit Dagnaka dia izao izy voasambotry ny Polisim-pirenena izao.
Taorian'ny famotorana natao dia hatolotra ny Fitsarana Ambaratonga voaloany any Antalaha i Damy Rodolphe, ilay nahavanon-doza.
lundi, 05 février 2018 13:57
Manakara: Zazalahy kely 7 taona narapaky ny voay roa
Manoran-dava aty Manakara, miakatra ny rano, masiaka koa ny voay indrindra amin'ireo kaominina manodidina. Zazalahy kely 7 taona no maty tsy tra-drano nifandrotehan'ny voay roa ny alakamisy lasa teo.
lundi, 05 février 2018 13:55
Marolambo: Miaka-bidy ny PPN
Tapaka ny lalana mampitohy an'i Mahanoro amin'i Marolambo. Miaka-bidy noho izany ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. 800 ka hatramin'ny 1000 Ariary ny kapoakan'ny vary.